China 8011 Prepainted Aluminium Foil Yechikafu Package fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Prepainted aluminium foil inoreva kupendesa pamusoro pealuminium alloy.Nekuti kuita kwealuminium alloy kwakanyatso kugadzikana, hazvisi nyore kuita ngura.Kazhinji, mushure mekurapwa kwakakosha, nzvimbo yacho inogona kuvimbiswa kuti isapera kweanenge makore makumi matatu.Uyezve, nekuda kwekuderera kwayo uye kuoma kwakanyanya, huremu pavhoriyamu yeyuniti ndiyo yakareruka pakati pezvinhu zvesimbi.
Prepainted aluminium foil inoreva iyo pre pented color yealuminium rolls isati yacheka, kukotama, kukunguruka uye mamwe maitiro ekugadzira, akasiyana nenzira yekupfapfaidza (spray pendi mushure mekuumbwa).
Inoshandiswa munzira dzinoverengeka dzekuvandudza kutaridzika kwezvivakwa zveveruzhinji uye zvekutengesa.Mumusika wazvino wekuvaka, 70% yemidziyo yesimbi inoshandiswa pachivakwa chekuvaka ndeye pre roller coated, Chigadzirwa chacho chakasvibira, chinodzivirira kutu, kuchengetedza mahara uye kushandiswazve.
1) Giredhi: 1000, 3000, 5000, 8000 series
2) Hasha: F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, nezvimwewo.
3) Rudzi: Ral ruvara kana zvinoenderana nemutengi sampuli
4) Mhando yekupenda: PE, PVDF
5) Kurapa kwepamusoro: kubhurowa, kupedzisa kwemarble, kusungirirwa, kupera kwegirazi
6) Ukobvu: 0.01-1.5mm
7) Upamhi: 50-2000mm
Prepainted aluminium coil yave imwe yeanonyanya kufarirwa pamusoro pekushongedza zvinhu.Yakasvibira nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kusimba uye maitiro akanaka.
Sechinhu chekushongedza, ine zvinotevera zvisingaenzaniswi zvakanakira pane zvimwe zvigadzirwa:
Ruvara rwakafanana, rwakajeka uye rwakachena, kunamatira kwakasimba, kusimba kwakasimba, asidhi uye alkali kuramba, corrosion resistance, weathering resistance, decay resistance, friction resistance, ultraviolet radiation resistance uye kusimba kwemamiriro ekunze.
Nokudaro, inoshandiswa zvakanyanya mumasuo nemahwindo, makamuri ezuva, kuvhara kwebhokisi uye mamwe minda yezvivakwa zvepamusoro.Rudzi rwakaputirwa nealuminium coil rave imwe yeanonyanya kufarirwa pamusoro pekushongedza zvinhu.Yakasvibira nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kusimba uye maitiro akanaka.
Prepainted aluminium inoshandiswa mune zvakasiyana-siyana zvekushandisa.Nekure huru iri mumusika wekuvaka uko envelopu yekuvaka inomiririra kushandiswa kukuru.Prepainted aluminiyamu inoshandiswa chero kupi kwekupedzisira kushandiswa kunoda pendi yemhando yepamusoro pachinhu chakagadzirwa.